အင်တာဗျူး အတွေ့အကြုံ – Grab Love Story
ကျွန်မ နံမည်..မစီစီ တရုပ်ကပြားမလေးပေါ့…ကျမ ပါပါ သေသွားပြီးနောက်ပိုင်း မေမေနဲ့ အတူတူ ဘဝ ကို ခက်ခက်ခဲခဲ ရုံးကန်ခဲ့ရပါတယ်…ဘွဲ့လည်းရပြီးပြီ…ကွန်ပြူတာ ဒီပလိုမာ လည်းအောင်ပြီးပါပြီ…ကုမ္ပဏီတွေက လျှောက်လွှာ ခေါ်တိုင်း လျှောက်ခဲ့ပေမဲ့ အဆင်မပြေခဲ့ ပါဘူး…အခု ကုမ္ပဏီ မှာ အတွင်းရေးမှူး ရာထူးနဲ့ လျှောက်လွှာ ခေါ်ထားလို့ လျှောက်တာ စာတွေ့ လည်း အောင်ခဲ့ပါပြီ.. အခု လူတွေ့ဖြေရမယ်…စကာတင် ရွေးထားတာ သုံးယောက် ထဲက တစ်ယောက်ဘဲ ရွေးမယ် ဆိုတာ သိရလို့
စိတ်တွေလှုပ်ရှားမိပါတယ်…လစာကလည်း မက်လောက်တယ်..လောလောဆယ် အိမ်စရိတ်နဲ့ မေမေအတွက် ဆေးဘိုးက အရေးတစ်ကြီးလိုနေတာကြောင့် ဒီအလုပ်ကို ရမှဖြစ်မှာပါ…
ကုမ္ပဏီက ဝန်ထမ်းတွေအားလုံး အဆင်ပြေကြတယ်…ကုမ္ပဏီ သူဌေးကလည်း
သဘောကောင်းတယ်..အလုပ်ကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလို ဆုချပေးတယ်…ဆုကြေးငွေ ရတာနဲ့တင် စားလို့လောက်တယ် လို့ပြောကြတယ်…ကောင်းသတင်းလေးတွေကတော့ မွှေးနေတာပါဘဲ…ဒါပေမဲ့ ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်ရဘို့ ကတော့သိပ်မလွယ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်..
ကံကောင်း တာလား ..ဆိုးတာလား မသိပါဘူး…
ကျမ အရင်ဆုံး လူတွေ့စစ်ဆေးဘို့ အလှည့်ကျတယ်လေ…..သူတို့ ကုမ္ပဏီ က
ဝတ်စုံကိုဝတ်ပြီးမှဝင်ဖြေရတယ်…ဝတ်စုံက ကျမနဲ့တိုင်းချုပ်ထားသလို..ဖစ်ဆိုက်လေးပါဘဲ… စစ်မေးကြမဲ့ သူက သုံးယောက်ပါ..အားလုံးလူလတ်ပိုင်းအရွယ်တွေပါဘဲ..
ကျမဝင်လာ ကထဲက ဝိုင်းကြည့်နေလိုက်တာ မျက်စိကျွတ်မကျလောက်အောင်ဘဲ…
သူတို့ကို ကျမကြည့်လိုက်တော့ အားလုံးကပြုံးပြကြတယ်..ကျမလည်းပြန်ပြုံးပြလိုက်ပါတယ်… သဘောကောင်းတဲ့ပုံစံပါဘဲ…ခေါင်းဆောင်လို့ထင်ရတဲ့အကိုကြီးက…
ကျနော်တို့က လူတွေ့စစ်ဆေးမဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေပါ..ကျနော်တို့မေးတာတွေကို စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီးဖြေကြားပေးပါ…. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် …
အတွင်းရေးမှူး လောင်းရဲ့ နံမည်ပြောပါ..
မစီစီ..ဒီအလုပ်ကို ဘာကြောင့်လုပ်ချင်တာလဲ ဆိုတာသိပါရစေ..
အဓိက စားဝတ်နေရေးကြောင့်ပါ..ပြီးတော့ ကျွန်မ ဝါသနာလည်းပါလို့ပါ..
တယ်လီဖုန်း သံ မည်လာလို့အကိုကြီးတစ်ယောက်က ကိုင်လိုက်တယ်…
ကျွန်တော်ကို ဘော့စ် ခေါ်နေလို့သွားလိုက်အုံး မယ် ..ခင်ဗျားတို့ဘဲ ..ဆက်မေးလိုက်ပါ.. အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး အခန်းထဲမှထွက် သွားတော့ နှစ်ယောက်ဘဲကျန်တော့တယ်…..
ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီက လိုအပ်တဲ့ အရည် အချင်းနဲ့ မစီစီ မှာရှိတဲ့ အရည်အချင်း ကိုက်ညီမှု ရှိတဲ့အတွက် အလုပ်ရနိုင်ဘို့ အခွင့်အရေးများပါတယ်..
အဓိက..ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် အပေါ်မူတည်တာပေါ့..အတွင်းရေးမှူး ဆိုတဲ့ ရာထူးရဘို့ အလုပ်က မလွယ်ပါဘူး… ကျွန်တော်တို့ ဘော့စ် လိုလားချက် နဲ့ ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးရမှာ မို့ ကျွန်တော်တို့ ခိုင်းတာတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်..မလုပ် နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းငြင်း ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်.. မစီစီ နဲ့ အဆင်ပြေရင် နောက်မိန်းခလေးတွေကို မခေါ်တော့ပါဘူး…အဆင်မပြေမှ ခေါ်မှာပါ..
အကိုကြီး တို့ကိုဘဲအားကိုးပါတယ်ရှင်..ကျွန်မဒီအလုပ်ကိုရမှဖြစ်မှာမလို့ပါ..ကျွန်မလိုအပ်ချက် ရှိရင်လည်းသင်ပေးကြပါနော်..
မစီစီ ရဲ့ ကိုယ်ရေး ရာဇဝင်မှာ အပျို လို့ ရေးထားတာ တွေ့ပါတယ်..အပျိုစစ်စစ် ဟုတ်/မဟုတ် ကျွန်တော်တို့ တာဝန်အရ စစ်ဆေး ရမှာ မို့လို့ အင်္ကျီတွေအားလုံးချွတ်ပေးပါ…
ရှင်...မျှော်လင့်မထားသော ..မေးခွန်းကိုကြားလိုက်ရတော့ ရင်ထဲမှာ ဒိန်းခနဲဖြစ်သွားသည်...တစ်ခြားတစ်စိမ်း ယောကျာ်းလေး တွေရှေ့ မှာ ဝတ်လစ်စလစ် ချွတ်ပြရမှာဆိုတော့..အင်း…ခက်သားလား… ရှက်စရာ ကောင်းလှသည်...သွေးနထင်ရောက်သွားသည်ထင်ပါရဲ့ စီစီ ပါးနှစ်ဖက် ရဲရဲနီသွားသည်... မစီစီ မလုပ်နိုင် ရင်လည်း ရပါတယ်.ဒါ.. အခြေခံဘဲ ရှိပါသေးတယ်...နောက်တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုး ခိုင်းမှာပါ... မလုပ်နိုင်ရင် နောက်တစ်ယောက် ခေါ် လိုက်ပါ့မယ်.. မဟုတ်ပါဘူး…ချွတ်ပါ့မယ်ရှင် ..အင်္ကျီချွတ်ပြီးရင် ဘယ်မှာထားရမလဲ လို့စဉ်းစားနေတာပါ.. ကိစ္စ မရှိပါဘူး ကျွန်တော့ ကိုပေးထားပါ.. အကိုကြီး တစ်ယောက် အင်္ကျီလာယူ၍ အပေါ်ကုတ်အင်္ကျီ ချွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်... ကျွန်မရင်တွေခုန်နေပါပြီ…မျက်နှာလေးအောက်ငုံ့ပြီးတော့… ရှပ်အင်္ကျီ ကိုချွတ်လိုက်ရာ ဘရာစီယာ အောက်မှနို့နှစ်လုံးမှာ ရုန်းထွက်လာပါတော့ တယ်....ကျွန်မသိနေတယ်..သူတို့တွေ..အရသာခံပြီးကြည့်နေကြမှာပါ… မစီစီ….ကျေဇူးပြုပြီး စကတ် ကိုလည်းချွတ်ပြီး ရှေ့မှာတင်ထားလိုက်ပါ... အင်တာဗျူးတာလား...အမိန့်ပေးနေတာလား..မသိတော့.ဒီအခြေအနေရောက်မှတော့မထူးတော့ပြီ...သူ့ဆန်စားမှရဲ ရတော့မှာပေါ့….စကတ်ချွတ်ပြီး ကျွန်မရဲ့ ဖုတ်ဖုတ်လေးကို ကွယ်ထားလိုက်တော့...... မောင်မင်းကြီးသားများစိတ်မရှည်တော့ပြီထင်ပါရဲ့….. မစီစီ အဝတ် အစား အားလုံးချွတ်ပေးပါ...ကျွန်တော်တို့လည်း တစ်ခြား အလုပ်လေးတွေ ရှိသေးလို့ မြန်မြန်လေးဆောင်ရွက်ပေးပါ….. ရှက်ရှက်နဲ့ဘဲ ဘလာစီယာ ကိုချွတ်ပေးလိုက် ပါတော့တယ်..ကျမတစ်ကိုယ်လုံးအဝတ်အစား မရှိတော့ပါဘူး... အသားကလည်းဖြူတယ် ဆိုတော့ ရေဆေးငါးကြီးဖြစ်နေတဲ့ ကျမ တစ်ကိုယ်လုံး ကို စားမလို ဝါးမလို ဝိုင်းကြည့်နေကြတာ ကျမအံလေး ကြိတ်ထားရုံကလွဲလို့ ဘာများတတ်နိုင်အုံးမှာ လည်းရှင်... အကိုကြီးတစ်ယောက်က ကျွန်မ အနားကို လာတာတွေ့ရတော့ ဘာများလုပ်ခိုင်း မလဲဆိုပြီး ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ပေါ့ရှင်... နောက်ကနေပြီး ကျမနို့ နှစ်လုံးကိုကိုင်လိုက်ပါတယ်.. နို့အုံက နို့ခဲလေးတွေ ရှိသေးတယ် ဆိုတော့ အပျိုနို့ဆိုတာ အသိအမှတ်ပြုပါတယ်.... ကျမရင်တွေနှစ်လုံးတွေခုန်ပြီး...စိတ်ထဲမှာလည်း မရိုးမရွဖြစ်လာတာပေါ့....မျုက်စိနှစ်လုံးကို ပိတ်ပြီး သူပြုသမျှ နုနေ လိုက်ပါတယ်.. သူစိတ်ကျေနပ်ဘို့ အရေးကြီးတယ်လေ... ကျမက အပျိုမှ မစစ်ဘဲ...ကျမရဲ့ ချစ်သူ ရဲကိုကို က ကျမကို ပါကင်ဖောက်သွားပြီးပြီလေ... ကျမ စိုးရိမ်စိတ်တွေ ဝင်လာတာပေါ့..ဒါကြောင့် လိမ်လိမ် မာမာလေး နေပေးလိုက်ပါတယ်... ကျမ နို့နှစ်လုံးကို စိတ်ကြိုက် ချေမွှ ပေးနေပါတော့တယ်..နို့သီးထိပ်လေးတွေကိုလည်း လက်ထိပ်လေးတွေနဲ့ ပွတ်ပေးတော့ကျမ နို့သီးထိပ်လေးတွေ မာတောင်လာတာပေါ့..ကျမလိမ်လိမ်မာမာနဲ့ ငြိမ်ငြိမ်လေး နေပေးတော့ သူကျေနပ်နေမှာပေါ့.. စီစီ ခုန်ပေါ် တက်ထိုင်လိုက်ပါ...ဆောက်ဖုတ်ကို စစ်ဆေးရပါ့မယ်.... ကျမ စိုးရိမ်နေတဲ့ ကိစ္စ စစ်ဆေးကြတော့မယ်...ကျမ သေတောင် သေလိုက်ချင်တော့တယ်...ကျမ မှာအပျိုမှေး ဘယ်ရှိတော့မလဲ... ရဲကိုကို လိုးလို့ စုတ်ပြတ်သွားပြီလေ...ဒါပေမဲ့ ဟန်ကိုယ့်ဖို့ လုပ်ပြီး... ကျမခုံပေါ်တက်လိုက်ပါတယ်..ကျမ ပေါင်နှစ်လုံးကို ဖြဲပြီး ဆောက်ဖုတ်ကို ကြည့်မှာကိုး ကျမသိတာပေါ့..ပေါင်နှစ်လုံးကိုဖြေးဖြေးလေး ကားပေးလိုက်ပြီး ဆောက်ဖုတ်လေးကိုတော့ စိထားလိုက်တာပေါ့... သူ့ဖာသာသူ လက်နှစ်ချောင်းနဲ့ ဖြဲတော့တာဘဲ. လက်ညှိုးကလည်း ဟိုပွတ် ဒီပွတ်နဲ့ပေါ့...ဆောက်ဖုတ် အကွဲကြောင်းလေး တစ်လျှောက် လိုက်ပွတ်နေတယ်လေ.. ကျမ ဘယ်နေနိုင်တော့မှာလဲ..အရည် တွေထွက်လာတာပေါ့...ဆောက်စိလေးကိုလည်း ပွတ်ပေးလိုက်တော့ ကျမ ကော့ပြန်သွားတာပေါ့... အင်း..ဟင်း..ဟင်း... ကျမ ပါးစပ်က ငြီးသံလေးထွက်လာတော့ သူလေ..သူပေါ့...ကျမ ဆောက်ဖုတ်ကို...ပါးစပ်ကြီးနဲ့ လျှက်တော့တာဘဲ...ကျမ အသဲတွေ အေးသွားတာဘဲ.ဒါမျိုးတစ်ခါမှ မခံဘူးတော့ သိပ်ကြိုက်သွားတယ်..ပေါင်ကိုလည်း အစွမ်းကုန် ကားပေးလိုက်တယ်.. အစေ့လေးကို ထိအောင်လို့ပေါ့....လျှာကြီးနဲ့ ကျမဆောက်ပေါက်ထဲကို ထိုးထဲ့လိုက်တော့ ကျမ ရင်တွေ ဗလောင်ဆူသွားတာဘဲ.. နောက်က အကိုကြီးကလည်းကျမကို ထိမ်းပေးထားသလိုလိုနဲ့ ကျမ နို့နှစ်လုံးကို ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတော့တာဘဲရှင်... ယောကျာ်း နှစ်ယောက်နဲ့ တစ်ခါမှ အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ ကျမအတွက် ရင်တလှပ်လှပ် အသဲတအေးအေးနဲ့ ပေါ့..... ဘာဂျာမှုတ်နေတဲ့ အကိုကြီးက ကျမ ဆောက်ခေါင်းထဲကို သူ့ လက်ညှိုးတစ်ချောင်း ထိုးထည့် လိုက်တယ်...ကျမ ပါးစပ် ကလေးဟ သွားတာကိုသူကြည့် ပြီး ... မင်းကတစ်ကယ်ကိုအပျိုစစ်စစ်လေးဘဲကိုး.. အား..အား...အင်း..အင်း... ကျမ ပါးစပ်က မူလကျီ တူလကျီ အော်ပေးလိုက်တော့...လက်ညှိုးလေးနဲ့ အသွင်းအထုတ်လုပ်ပြီး လိုးနေတော့တာပေါ့... ကျမသိတာပေါ့...နောက်ပြီး သူ့ဟာကြီးနဲ့ လိုးမှာလေ...ကျမ ကိုစိတ်ပါအောင်လုပ်နေတာမလား..လူလည်ကြီးကို မေးလိုက်ချင်စမ်းပါရဲ့ .. ဟင်း..ဟင်း.. ဒါပေမဲ့…မမေးရဲဘူးလေ..ကျမဘဝက သူ့လက်ထဲမှာမဟုတ်လား...သူကအပျိုစစ်တယ်လို့ ပြောတော့ ကျမကြိတ်ပြီး ဝမ်းသာ နေတာပေါ့... ဒါဆို ကျမ အလုပ်ရဘို့သေချာသွားပြီလေ.. သူ့လက်ညှိုးတစ်ချောင်းက တည့်တည့် အထုတ်အသွင်းလုပ်နေရာက.. ကျမဆောက်ရည်လေးတွေနဲ့ စီးစီး ပိုင်ပိုင် လည်းဖြစ်သွားရော လက်ကို ပက်လက်လှန်လိုက်ပြီး ကျမ ဆောက်ခေါင်း အမိုးကို လက်ညှိုးတစ်ချောင်းနဲ့ ပွတ်နေတော့တာဘဲ ဆောက်ဖုတ်ထဲမှာ ဘာနဲ့သွားထိတယ် မသိပါဘူး..တစ်ခါမှ မခံစားဘူးတဲ့ အရသာခံစားရတယ်.. ထိတယ်..တစ်ကယ်ကိုထိတယ်... ဆောက်ရည်တွေလည်း တစ်ဗွက်ဗွက်နဲ့ ထွက်လာတော့ လက်တစ်ချောင်းက ချောင်ချောင်ချိချိ ဖြစ်သွားတာပေါ့... သူ့လက်တစ်ချောင်းကနေ လက်နှစ်ချောင်းထိုးထည့်ပြီး ကျမ အမိုးကို ကုတ်နေတော့ ကျမကော့ပြန်သွားတော့တာပေါ့ရှင်... အင်း..အင်း..အား..အား.. ဟင်း..ဟင်း..ဟင်း.. ဒီတစ်ခါ ဟန်ဆောင်တာ မဟုတ်တော့ဘူး..ကျမ တစ်ကယ်ဖီးတက်လာလို့ပါ..သူ့ကိုတက်လိုးပါတော့ လို့ပြောချင်ပေမဲ့ အပျိုစစ်စစ်လေ..ပြောလို့ မဖြစ်ဘူး..သူပညာပေးသမျှခံနေရတော့တာပေါ့... ကိုယ့်အလှည့်ရောက်လာရင်တော့ ကောင်းကောင်းပညာပြန်ပေးလိုက်အုန်းမယ်.. ကျမ နောက်က အကိုကြီးကလည်း နို့နှစ်လုံးကို ကောင်းကောင်း ကိုင်နေတော့တာဘဲ... ရှေ့ကအကိုကြီးကလည်း သူ့လက်နှစ်ချောင်းနဲ့ ဆောက်ဖုတ်ထဲကို ထိုးမွှေနေတော့တာပါဘဲ... တစ်အားကောင်းလွန်းလို့ ကျမ မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီး ကောင်းကောင်းလေးဇိမ်ခံနေတော့တာပေါ့... ဟင်း..ဟင်း..ဟင်း..စွပ်..စွပ်.. အား..အား..အင်း..အင်း..ပြွတ်..ပြွတ်..ပြွတ်.. ကျမ ရှေ့ကို ဂရုစိုက်နေတုန်း နောက်က အကိုကြီး အင်္ကျီ တွေချွတ်လိုက်ပြီး ကျမ ကိုသူ့ဘက်ဆွဲလှဲ့ လိုက်တယ်..သူ့လီးကြီးက မာတောက်နေတာဘဲ...ပုလွေမှုတ်ပေး ဆိုပြီးကျမ ဆံပင်ကိုဆွဲပြီး သူ့လီးကြီးနဲ့ ကျမ ပါးစပ်ထဲ ထိုးထည့်လိုက်တော့တာဘဲ... ကျမ အနေအထား... နောက်က အကိုကြီးကို ဖင်ကုန်းပေး သလိုဖြစ်သွားတာပေါ့... နောက်ကအကိုကြီးလေ ပုံစံမပျက် ဘဲ..သူကတော့ လက်နှစ်ချောင်းနဲ့ ကျမ ဆောက်ဖုတ်ကို ထုတ်သွင်း လုပ်နေဆဲပေါ့.... ရှေ့ကအကိုကြီးရဲ့ လီးကြီးကို စစုပ်ပေးတော့ရွံ သလိုလိုဘဲ..ပူနွေးနွေးကြီး နဲ့ မာတောင်နေတဲ့လီးကို...ကျမပြွတ်ခနဲ စုပ်ပေး လိုက်တော့ သူ့ပါးစပ်က ငြီးသံသဲ့သဲ့ ထွက်လာတယ်....... အင်း ..ကောင်းလိုက်တာ..ညီမလေးရယ်.. အား ..ကောင်းလိုက်တာ... ကောင်းလိုက်တာက ညီမလေးရယ်..လို့ ပြောတဲ့အသံက ကျမ အတွက် ပိုပြီးစိတ်လာစေပါတယ်...နောက်က အကိုကြီး ကလည်း ဆောက်ဖုတ်ကို အထုတ်အသွင်းလုပ်ပေးနေတော့ စိတ်ကပိုပြီးပါလာတာပေါ့... ကျမ တတ်သလောက် မှတ်သလောက် ပီပီပြင်ပြင် စုပ်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်... ပြွတ်.…ပြွတ်..ပြွတ်….. အား..အား..အား...အင်း...အင်း...အစ်... နောက်က အကိုကြီးလည်း စိတ်ပါလာတော့ အဝတ်အစားတွေချွတ်ပစ်လိုက်တယ်... ကျမကိုနောက်ကနေ လိုးတော့မယ်ထင်ပါရဲ့.. ကျမ အထင် တက်တက် စင်အောင်လွဲသွားတော့တာဘဲ...သူ့ကိုလည်း မှုတ်ပေးရမယ်တဲ့… ဗီဒီယို ဇတ်ကားထဲ မှာ ကြည့်ဖူးတာ.. အခု ကျမ တစ်ကယ် သရုပ်ဆောင်ရ တော့မှာပေါ့.. သူ့လီးကြီးကလည်း မသေးဘူး တုတ်တုတ်ခဲခဲ ကြီး...ကျမလည်း စိတ်ပါနေပြီ ဆိုတော့ တစ်ယောက် တစ်လှည့် စီ စုပ်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်.... ပြွတ်..ပြွတ်..ပြွတ်..ပလပ်..ပလပ်.. အိုး..အိုး..အား...အား...အီး..အီး... နောက်က အကိုကြီး မနေနိုင်တော့ဘူး..ထင်ပါရဲ့ ကျမကို ကုန်းခိုင်းပြီးနောက်ကနေ တက်လိုးတော့မှာပေါ့.. ကျမ ခါးလေးခွက်ပြီး ဖင်လေးကို ကော့ပေးလိုက်ပါတယ်..ကျမဆောက်ဖုတ် ပြူးထွက်လာပြီး ဆောက်ဖုတ်ကွဲကြောင်းလေးပြဲထွက်လာပါတော့တယ်...ရှေ့ကအကိုကြီးကလည်း သူ့လီးကြီးကို အတင်းစုပ်ခိုင်း ... နောက် ကအကိုကြီးကလည်း...ကျမ ဆောက်ဖုတ်ထဲကို သူ့လီးထိပ် ပိုင်းလေးနဲ့ စပြီးထိုးထဲ့ လိုက်တော့... အား..အိုး...ရှီး...အင်း..ဟင်း.. ကျမ နဲနဲ အောင့်သွားတာကလွဲလို့ ခံနိုင်ပါတယ်..သူကလည်း အတွေ့ အကြုံများတယ်..ထိပ်ပိုင်းလေးကိုဘဲ အသွင်းအထုတ် လုပ်ပြီး လိုးပေးနေတော့...ကျမ ကောင်းလွန်းလို့ ဆောက်ရည်တွေ စီးထွက်လာတာပေါ..ဆောက်ဖုတ် တစ်ခုလုံးလည်းပူလာပြီး...ယားလာပါတော့တယ်.. ကျမလက်လေးနဲ့ မသိမသာ သူပေါင်လေးကိုဆွဲလိုက်ပြီး ဖင်ကိုနောက်ကိုကော့ ကော့ ပေးလိုက်ပါတယ်.... သူသိသွားပြီ..ကျမ ခံချင်နေပြီဆိုတာ ကိုပေါ့.... ကျမ ခါးနှစ်ဖက် ကို ကိုင်ပြီး အဆုံးထိဆောင့်ချလိုက်ပါတော့တယ်... အား...အူး....ဝူး...ဟွတ်..ဟွတ်... ဆောက်ဖုတ်ထဲကို လီးကတစ်ဆုံး ဝင်သွားတော့ ကျမ အော်လိုက်မိတာပေါ့..ကျမ ပါးစပ် ဟ နေတဲ့ အချိန်မှာ..နောက်ကတွန်းထဲ့ လိုက်တော့ ရှေ့ကပါးစပ်ထဲစုပ်ထားတဲ့ လီးတစ်ချောင်းလုံး အာခေါင်ထဲ ထိ အဆုံးဝင်သွားတော့တာပေါ့... အဟွတ်..အဟွတ်..ဟွတ်.. အား..အား...အီး..အီး..ဝူး...အိုး...အစ်...ကောင်းလိုက်ထာ.. ကျမလည်ချောင်းထဲရောက်နေတဲ့..ရှေ့ကအကိုကြီး လီးကို ညှစ်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားတော့ ကောင်းလွန်းလို့ မထိန်းနိုင်တော့ ဘဲ သုတ်ရေတွေ တဗွက်ဗွက်နဲ့ ကျမ ပါးစပ်ထဲ ပန်းထည့် လိုက်ပါတော့တယ်.. ပူကနဲ..ပူကနဲ.. ထွက်လာတဲ့ သုတ်ရည်တွေကို ကျမ..ထွေးထုတ် လို့လည်းမရတော့ မျိုချလိုက်ရပါတော့တယ်ရှင်.. အကိုကြီး မင်းကိုတော့ တစ်အားစွဲလမ်း သွားပြီ...အလုပ်ခန့် ဘို့လည်း ရွေးလိုက်ပြီ..အပြင် ကမိန်းခလေးတွေကို မရွေးတော့ဘူး ဆိုတာ သွားပြောလိုက်တော့မယ်.... မင်းတို့ အေးအေး ဆေးဆေး နေကြပါ.. ပုလွေရှင် အကိုကြီး ကျမကို အမှတ်ပြည့်ပေးသွားပါတယ်...ကျမ မှုတ်ရကျိူးနပ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့...ကျမကိုပြောပြာဆိုဆို နဲ့ သူ့ရဲ့အဝတ်အစားတွေ ယူပြီး ထွက်သွားတော့ပါတယ်.. ယောကျာ်းတွေက ဒီလိုပါဘဲ သူတို့ ပြီးသွားပြီဆိုရင် မိန်းမတွေကို ပစ်ထားပြီး ထွက်သွားကြတော့တာဘဲ... တစ်ယောက်တော့ ရှင်းသွားပြီ...နောက်က ကပ်နေတဲ့ လူကြီးဘဲကျန်တော့တယ်.နောက်ကလူကြီးက တစ်ယောက်ထဲ ကျန်ကာမှ ပိုဆိုးလာတော့တယ်..မညှာမတာ နောက်ကနေ ဆောင့်လိုးတော့တာဘဲ...ဒ‘ီလောက်ဆောင့် လိုးနေမှတော့ ဘယ်မိန်းခလေး ခံ နိုင် မှာလဲ... အော်လို့လည်းမရတော့ဘူး...အဆက်မပြတ် ဆောင့် ဆောင့် လိုးနေတော့တာဘဲ... ဖတ်..ဖတ်.ဖတ်..ဘွတ်..ဘွတ်.. အား..အကိုကြီး..ဖြေး..ဖြေး..အောင့်တယ်..အီး.. အကိုကြီး ပြီးတော့မယ်...ခဏလေး အောင့်ခံလိုက်ပါ... ဖတ်..ဖတ်..ဖတ်..ဘွတ်..ဘွတ်..အား..အား..ကောင်း လိုက်တာ...ဝူး... ကျမ ဆောက်ဖုတ်ထဲ ပူကနဲ ဖြစ်သွားပါတယ်...ကျမလည်း...အထဲက တစ်အားညှစ်ချင်လာတာနဲ့ ညှစ်လိုက်တော့... အား..အား...အကိုကြီး..ဆောင့် ..ဆောင့် ..အီး...အီး..အစ် ဖတ်..ဖတ်..ဖတ်..ဘွတ်..ဘွတ်.. စွိ...စွိ...အား.ကောင်းလိုက်တာ..ဗျစ်..ဗျစ်..ဘွတ်... အကိုကြီး..ကျမပြီးတော့မယ်...မြန်မြန်လေး...ဆောင့်...အား... အချက်၂ဝလောက်မနားတန်း ဆောင့်လိုးလိုက်တဲ့အခါ.... အတ်..ဖတ်...ဖတ်...ဗျပ်..ဗျပ်....ဘွတ်... သူ့ရဲ့ အရည်တွေ ကျမရဲ့ အရည်တွေ နဲ့ ချောင်နေပါတော့တယ်... ကျမလည်း အားကုန်ညှစ် ပေးလိုက်ပါတယ်..... အား...ဆောင့်...အီး...အစ်.... ကျမလည်း ပြီးသွားပါတော့တယ်....သူလီးကြီးကို ကျမ ဆောက်ဖုတ်ထဲက ဆွဲချွတ်လိုက်ပါတယ်.. ပလွတ် ကျမနဲ့ သူ့ရဲ့သုတ်ရည်တွေ ကျမ ဆောက်ဖုတ် ထဲကစီး ထွက်ကျသွားပါတော့တယ်... ကျမလည်း..ဖတ်ဖတ်ကိုမောသွားတော့တာပါဘဲရှင်…. ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× သူလေ..ကျမကို ပွေ့ချီပြီး ကုလားထိုင်မှာ ထိုင်ချ လိုက်ပါတယ်..ကျမလည်း မောမောနဲ့သူ့အပေါ်ခွထိုင်ပြီးဖက်ထားလိုက်ပါတယ်.. သူက မဆိုးပါဘူး ..ပြီးတာနဲ့ ပစ်ထားပြီး မသွားဘူးပေါ...မိန်းခလေး ဆိုတာက ပြီးသွားပေမဲ့ စိတ်ကမပြေသေးဘူးလေ... အယုအယခံချင်တာပေါ့...သူက နားလည်တတ်လို့ ကျမ စိတ်ကျေနပ်နေမိပါတယ်...သူကျမကိုနမ်းပါတယ်... ကျမလည်း ပြန်နမ်းလိုက်ပါတယ်...သူကျမ နို့တွေကို ကိုင်ပြီး ဖြစ်ပေးပါတယ်.. ကျမလည်း ခံလို့ကောင်းလို့ ငြိမ်နေလိုက်ပါတယ်.... သူ့လီးကြီး ကပြန်မာလာတော့တယ်..ကျမ ပေါင်ကြားကို လာထောက်နေပြီ...ကျမ သိတယ် နောက်တခါ လိုးတော့မယ်လေ... အခြေအနေ မကောင်းတော့ဘူး ဆိုတာကိုပေါ့..ဒါကြောင့် နှပ်မနေတော့ဘဲ ခပ်မြန်မြန်လေး ခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်.. အကိုကြီး..ကျွန်မ ပြန်အုံးမယ်..နောက်နေ့ကျမှ တွေ့တာပေါ့ နော်... မင်း..အလုပ် မလုပ်ချင်တော့ဘူးလား....မနက်ဖြန် ကြရင် မင်း ဘော့စ် နဲ့တွေ့ရမှာ..ဘောစ် ကြိုက်တဲ့ နည်2နည်း မင်း ကိုသင်ပေးရ အုံးမယ်…ဒါမှ မနက်ဖြန် မင်းအဆင်ပြေမှာ..မင်း ကျွမ်းကျင်ကြောင်းကိုလည်း ...ငါကအစီရင်ခံရအုံးမှာဆိုတော့...မင်းသဘောဘဲ..ပြန်ချင်ရင်ပြန်ပေါ့..ပြန်ရင်တော့ မနက်ဖြန်လဲ ပြန်မလာနဲ့တော့.. မရတော့ဘူး အသိနောက်ကျသွားပြီ...သူ ကျမကို အကြင်နာတွေပေးနေတာက နောက်တစ်ခါ လိုးဘို့ဆွပေး နေတယ် ဆိုတာကိုပေါ့.. အခြေအနေက မခံလို့မဖြစ်တော့ဘူးလေ .. သူစိတ်ဆိုးသွားမှ ဒုက္ခ.....လုပ်သလိုမဖြစ်တော့တဲ့ လောကမှာ ဖြစ်သလိုဘဲ လုပ်ရတော့ မှာပေါ့.. မပြန်တော့ပါဘူးရှင်...အကိုကြီး ပြန်လွှတ်မှဘဲပြန်ပါတော့မယ်.. ပေါက်တဲ့ နှစ်ဖူး မထူးတော့ပါဘူး..သူ့ကိုဖက်ပြီးပြန်နမ်းနေလိုက်ပါတော့တယ်...ကျမလည်းတဖြေးဖြေး စိတ်ပါလာတော့ပါတယ်.. သူလည်းစိတ်ထလာပြီပေါ..သူ့လီးကြီးက တလှုပ်လှုပ်နဲ့ ကျမ ပေါင်ကြားမှာ ရွစိရွစိ ဖြစ်နေတော့တာဘဲ... ကျမကို အပေါ်နဲနဲ မြှောက်လိုက်ပြီး သူ့လီးကိုကျမ ဆောက်ဖုတ်ဝထဲ ထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်... ကျမ တဖြေးဖြေး ထိုင်ချ လိုက်တော့ သူ့လီးတစ်ချောင်းလုံး ကျမ ဆောက်ဖုတ်ထဲ ဝင်သွားပါတော့တယ်.. ဗွက်..ဗလွတ် ကျမ အပေါ်ကနေ စကောဝိုင်း ပေးပြီး ပွတ်ဆွဲပေးလိုက်ရာ .... ကောင်းလိုက်တာ..ဆောင့်ပေးစမ်းပါ..အင်း.ဟူး...အား........သူ..စိတ်တစ်အားလာနေပြီ..ကျမသိတာပေါ့….ကျမ ပေါင်နှစ်လုံးကို ကိုင်ပြီး ဆောင့်ဆောင့်ချ လိုက်တာ ကျမ လည်း..တော်တော် သဘောကျတယ်...သူလီးက ကျမ ဆောက်ဖုတ်အဆုံး အထိ ဝင်သွားတာကိုး ကောင်းတာပေါ့....ဟင်း..ဟင်း..ကျမသူ့အလိုကျ..အပေါ်ကနေ. တစ်ဖြေးဖြေးဆောင့်ပေး လိုက်ပါတယ်..တစ်ခါ တစ်လေ မြန်မြန်လေးဆောင့် ပေးပါတယ်...တခါတလေ..ပွတ်ဆွဲပေးလိုက်ပါတယ်. ကျမ ဆောက်ဖုတ် လည်းကျိန်းနေပါပြီ..သူကတော့ မမောနိုင် မပန်းနိုင်ပါဘဲရှင်...... သူဆီကထွက်တဲ့ ချွေးနဲ့ ကျမဆီကထွက်တဲ့ ချွေးတွေလည်း ရင်ဘတ်တစ်လျှောက် ပေါင်းစည်းမိပြီး ဆောက်ဖုတ်က လိုးလို့ ထွက်တဲ့ အသံ..ရင်ဘတ်က ချွေးတွေ ပွတ်ဆွဲတဲ့အသံနဲ့ ဆူညံနေတော့ တာဘဲရှင်.. ဘွတ်ဘွတ်ဘွတ်...ဗျက်ဗျက်ဗျက်...ဘွိဘွိဘွိ.. ဖတ်..ဖတ်..ဖတ်..ပလွတ်..ဗလွတ်..ဘွတ် သူလည်း ရင်ဘတ်တွေ ပူလာတယ် ထင်ပါတယ်..ကျမကို ဟိုဘက်လှည့်ခိုင်းပြီး အပေါ်က ဆက်ဆောင့်ခိုင်းပါတယ်... ဒ‘ီနည်းက ပိုထိတယ် ဆောက်ဖုတ် တစ်ခုလုံး ကျိန်းသွားတာဘဲ...သူ့ရဲ့ လီးက ကျမ အတွင်းက အမိုးသားကို ထိထိမိမိကြီးကို ပွတ်ပွတ်သွားတာကိုး...ကျမ မနေနိုင်တော့ဘူး ပြီးချင်လာတာပေါ့...ကျမလည်း အားရ ပါးရဆောင့်ထည့်လိုက်ပါတယ်.. အား..ထိတယ်ကွာ..ထိတယ်....တစ်အားကျင်တာဘဲ..အား..အင်း.. ဖတ်..ဖတ်..ဖတ်..ပြိ..ပြိ..ပြိ... ဆယ့်ငါးချက်လောက် အဆက်မပြတ်ဆောင့်ပေးလိုက်ရာ ....ကျမ မနေနိုင်တော့ဘူး...တစ်ချီပြီးသွားတာပေါ... အား..အား...အင့်..အင့်..အစ်..အစ်.. ကျမ ပြီးသွားလို့ ဆက်မဆောင့် နိုင်တော့ဘူးဆိုတာ ...သူသိတာပေါ့...ကျမ ကိုမပြီး စားပွဲပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်... ကျမရဲ့ ပေါင်တစ်ချောင်းကို မ ပြီး သူ့ပုခုံးပေါ်တင်လိုက်တယ်..ပြီးတော့ ကျမဆောက်ဖုတ်ထဲကို သူလီးကြီး တေ့ပြီး ထိုးထည့် လိုက်တော့တာပါဘဲ ရှင်... အား..အိုး...အူး..ဗျိ..ဘွတ်.. သူ့..လီးကဝင်သွားတာမှ တစ်ဆုံးပါ ဘဲ...ကျမနို့ကိုလက်တစ်ဖက်ကဖြစ်ပြီး အားယူကာဆောင့်လိုးနေလိုက်တာ.. စားပွဲ တစ်ခုလုံး လှုပ်နေတော့တာဘဲ.... ကျွိ..ကျွိ..ဘွတ်..ဘွတ်..ဖတ်..ဖတ်.. ပျတ်..ပျတ်..ဗွိ..ဗွိ..ဘွတ်..ဘွတ် အား...အား...အင်း...အင်း... သူပြီးတော့မယ်..ကျမ သိနေတယ်လေ..သူ့ရဲ့ အသက်ရှုသံတွေမြန်လာတယ်...သူ့လီးကြီးက ကျမဆောက်ဖုတ်ထဲမှာ...တစ်အားတင်းလာတယ်..ပွစိ ပွစိနဲ့ပေါ့ ..ပြီးတော့ သူဆောင့်တာတွေ အဆက်မပြတ်ဘဲ...စုတ်ပြတ်သတ်သွားအောင်ကို မညှာမတာ ဆောင့်နေတာ သူပြီးတော့မှာပေါ့..ကျမလည်း ပြိုင်တူပြီးဘို့...ဆောက်ဖုတ်လေးကို ရှုံ့ရှုံ့ ပေးလိုက်တော့ သူ့အသံထွက်လာတယ်.. အား..ကောင်းလိုက်တာ..ညီမလေးရယ်..အား..အား..ကောင်းလိုက်တာ.. အကိုကြီး..ဆောင့်ပါ..ညီမ..ပြီးချင်ပြီ..မြန်မြန်လေး..အား..အား..အစ်..အစ်..အင်း.. ကျမဆောက်ဖုတ်ထဲကိုသူ့ရဲ့ သုတ်ရည်တွေ တစ်ဗျင်းဗျင်းနဲ့ ပန်းထည့်လိုက်တော့ ဆောက်ခေါင်းထဲမှာ ပူကနဲ..ဖြစ်သွားပြန်ပြီ...ကျမလည်း တစ်အားညှစ်ပစ်လိုက်တော့တာပေါ့... ကျမတို့နှစ်ယောက်ပြိုင်တူ ပြီးသွားတာ.. သုတ်ရည်တွေလည်း..ကျမဆောက်ဖုတ်ထဲက စီးကျလာပါတော့တယ်.. ကျမလည်း ဖတ်ဖတ်ကိုမောသွားတော့တာဘဲရှင်….. ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× မနက်ဖြန် ဝ၈ဝဝ နာရီ မှာ ဘော့စ်နဲ့တွေ့ရမယ်...စောစောရောက်အောင်လာခဲ့ ...လှလှပပ လေးလည်း ပြင်လာခဲ့နော်...ကျမကို သေသေချာချာ မှာနေပါတော့တယ်... မနက်ဖြန် မှာသူဌေးနဲ့ ဘယ်လိုကြုံတွေ့ ရအုံးမယ် မသိ..ရင်တွေခုန်လိုက်တာနော်.... ဘရားသားကုမ္ပဏီ ... သူဌေးနဲ့တွေ့ဘို့ မနက်ဝ၈ဝဝနာရီ ချိန်းထားတာ ဆိုတော့ စောစောလေး ကုမ္ပဏီ ကိုရောက်အောင်လာခဲ့ပါတယ်.. တိုက်ဆိုင်လိုက်တာ… မနေ့က ပုလွေရှင် အကိုကြီးနဲ့ လှေခါးထိပ်မှာ တွေ့တော့ ကျမကို သူ့ရုံးခန်းထဲ ခေါ်သွားပါတယ်...ကျမ မလိုက်ချင်ပေမဲ့….မလွန်ဆန်နိုင်သေးဘူးလေ...ကျမ အလုပ်ခန့်စာက မရသေးဘူး..သူဌေးနဲ့ကလည်းမတွေ့ရသေးဘူးဆိုတော့...သူတို့ကိုဘဲအားကိုးရအုံးမှာ.. ဒါကြောင့်သူခေါ်ရာနောက်လိုက်သွားခဲ့ရပါတယ်...အခမ်းထဲလဲရောက်ရော..ဟင်း..စပြီလေ.. မနေ့က ညီမလေး မှုတ်ပေးတာ သိပ်ကောင်းတာဘဲ..အခုတစ်ခါလောက် မှုတ်ပေးစမ်းပါ.. ရှင်… ကျမ သူဌေးနဲ့တွေ့ရအုံးမယ်လေ.. သူဌေးက မလာသေးပါဘူး ….ဒို့နှစ်ယောက်ထောက်ခံထားရင် မင်းကိုအလုပ်ခန့် မှာသေချာပါတယ်…ဒို့နှစ်ယောက်က သူဌေးရဲ့ လူယုံတွေလေ... ကျမ မှာငြင်းနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပြီ.. သူ့ဘောင်းဘီဇစ်ကိုချွတ်ပေးလိုက်တော့ ကျမ မှုတ်ပေးရန် မှတစ်ပါး အခြားမရှိတော့ပြီ... သွေးပူလေ့ကျင့်တယ်လို့ဘဲ..စိတ်ထဲမှာ မှတ်ထင်ထားလိုက်ပါတော့တယ်... ကျမ စေတနာထားပြီး ကောင်းကောင်းလေး စုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်..လီးဒစ်လေးကို လျှာဖျားလေးနဲ့ ထိုးပေးတာတို့.. လီးထိပ် အကွဲကြောင်းလေးကို လျှာဖျားလေးနဲ့ ကလိပေးတာတို့ လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်....သူ့ရဲ့အသက်ရှုသံတွေမြန်လာတယ်.. လီးကြီးလဲ မာတောင်လာတော့တာပေါ့...ကျမ သူ့ရဲ့ လီးထိပ်ကို ခပ်တင်းတင်းလေး နှုတ်ခမ်းနဲ့ ဖိစုပ် ထားလိုက်ပြီး လက်က ဂွင်း တိုက် ပေးလိုက်တော့... ဟင်း..ဟင်း..ကောင်းလိုက်တာ..အင်း...ခပ်မြန်မြန်လေးလုပ်ပေးပါ..ဟင်း.. ကျမ ခပ်မြန်မြန်လေးလုပ်ပေးလိုက်တော့ သူကောင်းလွန်းလို့ သူ့လီးကြီးကို ရှေ့ကိုထိုး ..ထိုးပေးပါတော့တယ်..ကျမ လည်ချောင်းထဲ ကိုဝင်အောင်သွင်းနေတာလေ...ကျမသိတာပေါ့...နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ ဖိထားလိုက်တော့ မဝင်တော့ဘူးပေါ့.ဒ.ါပေမဲ့..အချိန်ကလည်း မရှိ တော့ဘူးဆိုတော့..တစ်ချက်..နှစ်ချက်လောက် လည်ချောင်းထဲ ထိုးထည့် ပေးလိုက်တယ် ဆိုရင်ဘဲ..ချောင်းဆိုးရတော့တာပေါ့… အဲဒီ တော့ သူပြီးချင်ပြီလေ..ကျမ ကိုမညှာမတာ လည်ဂုတ်က ကိုင်ပြီး ထိုးထိုးထည့်နေတော့တာဘဲ... သူ့လီး အဆမတန် မာလာပြီလေ ..ကျမသူ့ လီးကိုဂွင်းတိုက်ပေးလိုက်တော့....သုတ်ရေတွေ ကျမ ပါးစပ်ထဲ ပန်းထည့်တော့တာပါဘဲ.. သူ့လီးကို အပြင်မှာထုတ်ပြီး ခပ်မြန်မြန်လေး ဂွင်းတိုက်ပေးလိုက်ပါတယ်.. အား..အီး..အင်း...ဝူး...ဟင်း... သူ့သုတ်ရည် တွေ ကျမ မျက်နှာကို ပန်းထည့်လိုက်ပါတော့တယ်..ကျမ အင်္ကျီ စကတ် တွေ ပေကုန်တော့တာပေါ့.. ခက်ပြီ ...ကျမ အခုမှ ဝတ်စုံပြန်လဲလို့ကလည်း..အချိန်မမှီတော့ပြီ...ကုမ္ပဏီက ပေးထားတာကလည်း..လောလောဆယ် ဒီတစ်စုံဘဲ ရသေးတာမို့ ...ကျမ ငိုချင်လာမိပါတော့တယ်... ငိုမဲ့မဲ့ မျက်နှာလေးကို ကြည့်ပြီး …ပုလွေရှင်အကိုကြီးက..ပြုံးစစနဲ့.. စိတ်မပူပါနဲ့ စီစီလေး ..အကိုကြီး အပေါ်ကောင်းတဲ့ ညီမလေးကို ‘ဒုက္ခမရောက်စေရပါဘူး...အကိုကြီးဆီမှာ..အရင်က အတွင်းရေးမှူး မလေးဝတ်သွားတဲ့ ဝတ်စုံရှိတယ်...အဲဒီဝတ်စုံ ဝတ်သွားပါ.. ဘော့စ်ကဒီဝတ်စုံလေးကို သိပ်သဘောကျတာ..သူကိုယ်တိုင် အမြတ်တနိုးနဲ့သူ့ဆော်လေးကိုဝယ်ပေးထားတာပါ….ဒီဝတ်စုံလေးကိုတွေ့ရင်..ဘော့စိတ်တွေ လှုပ်လျှားလာမှာပါ… ပြီးတော့..ညီမလေးကို...အပျိုလားလို့ မေးရင်..ယောကျာ်းမရှိလို့ အပျိုလို့ ပြောရင်ရပါတယ်...အပျိုစစ်စစ်တော့ မဟုတ်ပါဘူးရှင်.. လို့ဖြေနော်... ရှင်....အကိုကြီးတို့ ပြောတုန်းက အပျိုစစ်စစ်မှ ကြိုက်တာဆို..အခုဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ.. ဟုတ်တယ်လေ..အကိုကြီးတို့ကတော့ အပျိုစစ်စစ်မှ ကြိုက်တယ်...ဘော့စ် ကတော့ နောက်ကြောင်းမရှုတ်ရအောင် အပျိုတော့ ဖြစ်ရမယ်.. ‘ဒါပေမဲ့ အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားကို ကြိုက်တယ်.. အပျိုစစ်စစ် ဆိုရင်ပြောရ ဆိုရ စည်းရုံးရတာတွေ အတင်းယူခိုင်းတာတို့ ချိန်းခြောက်တာတို့ ဖြစ်ဘူးတယ်.. ပြီးတော့ အတွေ့အကြုံမရှိတော့ နားလည်မှုမရှိဘူးလေ.. အဲဒါတွေ သင်ပေးဘို့ကလည်း အချိန်မပေးနိုင်ဘူး.. နောက်တစ်ချက်.. ဘော့စ်က ပုလွေမှုတ်ပေးတာကြိုက်တယ်... အကိုကြီးလိုပေါ့.... နောက်ပြီးပုံစံ အမျိုးမျိုးနဲ့ လိုးရတာကိုကြိုက်တယ်... ဟိုအကိုကြီးလိုပေါ့...အကိုကြီး တို့နှစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ပြီးပြီ ဆိုလို့ကတော့ ညီမလေး ဘော့စ်နဲ့ အဆင်ပြေမှာပါ...ပညာစုံ သင်ပေးလိုက်ပြီလေ... ကျေးဇူးပါဘဲရှင်..နောက်လည်း အချိန်ရယင် မှုတ်ပေးပါ့မယ်..အဝတ်အစားတွေ လဲပြီးပြီ ဆိုတော့ သွားရအောင်နော် အကိုကြီး လိုက်ပို့ပေးပါ့မယ်.. အလုပ်ရှင် သူဌေး၏ ရုံးခမ်း မို့ ဝင်ရမှာကြောက်နေသည်...ပုလွေရှင် အကိုကြီး လိုက်ပို့ပေး၍ ဝင်သွားလိုက်သည်.. အထဲမှာ သူဌေးနှင့် အတူ မနေ့က လိုးခဲ့ကြသည့် အကိုကြီးကိုတွေ့ရ၍ ဝမ်းသာသွားသည်...ယုံကြည်စိတ်များလည်း..ရှိလာသည်.. သူဌေးက ကျမ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နဲ့ လျှောက်လွှာကိုကြည့်နေသည်..အကိုကြီးက ကျမကိုမျက်စိမှိတ်ပြပြီး လက်မထောင်ပြသည်.. အခြေအနေကောင်းတယ် ပေါ့...ကျမ မကြောက်တော့ပါ...ရဲရဲဝံဝံ ရင်ဆိုင်ရန် အားအင်များ အပြည့်အဝရှိနေပြီဖြစ်သည်... မစီစီ ရှင် မင်းက အပျိုစစ်စစ်လား ရုတ်တရက် ကြီးမေးလိုက်တော့ ကျမ ဘာက စပြီးဖြေရမယ်မှန်းမသိ ကြောင်သွားပါတယ်.. အကိုကြီးက ဝင်ပြီးဖြေပေးပါတယ်.. ```သူဌေး …သူကလေ...
ကျမ တုန်လှုပ်သွားပါတယ်..အကိုကြီးကိုမသွားဘို့ ဆွဲထားလိုက်ပါတယ်…
အကိုကြီးက ကျမကိုပြုံးပြီး…ခေါင်းညိမ့်ပြတယ်…ကျမ ဘာကိုဆိုလိုမှန်း တော့မသိဘူး
အကိုကြီးလည်းထွက်သွား ရော သူဌေးက ကျမကို ထပ်မေးပါတယ်…
မစီစီ မေးတာ မဖြေသေးဘူးလေ..
ကျမ သတိရ ပြီ…ပုလွေရှင် အကိုကြီးသင်ပေးလိုက်တာလေ…ချက်ချင်းဘဲ..ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်… ကျမ ယောကျာ်း တစ်ခါမှ မရဘူးသေးပါဘူး..မင်္ဂလာလည်း တစ်ခါမှ မဆောင်ဘူးသေးပါဘူး… ဒါကြောင့် အပျိုလို့ ပြောမယ် ဆိုရင်တော့ရပါတယ်..ဒ‘ါပေမဲ့ အပျိုစစ်စစ်တော့ မဟုတ်ရပါဘူး ရှင်…
သိပ်ကောင်းတဲ့ အဖြေဘဲ…မစီစီ အမှတ်ပြည့် ပေးလိုက်ပါတယ်..မိန်းခလေး တော်တော်များများက အပျိုမဟုတ်ဘူးလို့. ပြောရမှာကို ဝန်လေးကြတယ်.. ဒ‘ါ့ကြောင့် ညာပြောတတ်ကြတယ်…ဒါဟာ လိမ်ညာမှုဘဲ..သစ္စာမရှိတာဘဲ…မစီစီက တော့ ရိုးသားတယ်…ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိတယ်..ဒီအချက်ကို အဓိကလိုချင်တာဖြစ်တယ်…
နှုတ်မေးခွန်းကတော့ ဒ‘ီလောက်ပါဘဲ…လက်တွေ့ စမ်းသတ်မှုဘဲ ကျန်ပါတော့တယ်…
ကျမ သိပ်ပျော်သွားတယ်..ပုလွေရှင် အကိုကြီး ကိုလည်း
သူဌေး လေ….ကျမဆီကို ထလာပြီး တစ်ကိုယ်လုံးခြေဆုံး ခေါင်းဆုံး ကြည့်နေလိုက်တာ အကြာကြီးဘဲ….
ကျမ ဘာလုပ်သင့်လဲ…ကျမက စ ရမှာလား..သူကစမှာလား…ကျမသူ့ မျက်နှာကို အကဲခတ်နေရတာပေါ့… သူ ကျမ ပုခုံးလေးကို ဖွဖွလေး ကိုင်ပြီး ဆက်တီခုံ ကိုခေါ်သွားပါတယ်…ကျမလည်း အလိုက်သင့် လိုက်သွားတာပေါ့..
ဆက်တီခုံပေါ်မှာထိုင်လိုက် တာနဲ့သူကျမကို ဖက်ပြီးပါးနှစ်ဖက်ကိုနမ်းပါတယ်…သူကစပြီလေ….ကျမငြိမ်ငြိမ်လေး နေပေးတော့..သူတစ်ဆင့်တက်
ပြီး ကျမ နှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းတယ်..ပြီးတော့ စုပ်တယ် ကျမလည်း တုန့်ပြန်မှု ပေးတဲ့အနေနဲ့ သူနှုပ်ခမ်းကို ပြန်စုပ်ပေးလိုက်တာ
ပေါ့ ..ဒါမျိုးတော့လာမလုပ်နဲ့…ရဲကိုကိုက သေချာသင်ပေးထားပြီးသား….နှုတ်ခမ်းချင်း စုတ်တဲ့အခါ…လျှာလေးက ၀ိုက်ဆွဲ..ကာထိုး…တဲ့ထိုး အမျိုးမျိုးလုပ်ပြလိုက်တော့…သူကျေနပ်သွားတယ်..သူ့ရဲ့လျှာနဲ့ ကျမ နှုတ်ခမ်းကိုလျှောက် ထိုးနေတော့ ဘာရမလဲ..သူ့လျှာကို ကျမ စုပ်ပစ်လိုက်တာပေါ့.
သူကလည်း အားကျမခံ ကျမရဲ့ လျှာကို ပြန်စုပ်တယ်လေ…ကျမ
ဖီလင်တက်လာတယ်..အပေါ်နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်ပေးလိုက် ..အောက်နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်ပေးလိုက် အပြန်အလှန် နမ်းစုပ်နေလိုက်ကြတာ လောကကြီးကို မေ့သွားတာဘဲ.. နမ်းနေရင်းက သူ့လက်တွေကျမရဲ့ စနေနှစ်ပွင့် ပေါ်ရောက်လာတယ်..
သူကျမ ရင်သားတွေကို အင်္ကျီ ပေါ်ကနေ ကိုင်လိုက်ပြီး..ကျမ ကိုအကဲခတ်နေတယ်..ကျမ လည်းဖီးတက်နေတော့.. ချွတ်ပေးလိုက်ရင်ကောင်းမလား …ရှင်ဘာလုပ်ချင်လို့လဲ…သူ့ကိုပြုံးစစနဲ့ ပြန်ကြည့်လိုက်တာပေါ့…
သူ ..ကျမ နို့သီးကို ဖြစ်ရင်းနဲ့ ကျမ နားရွက် ကိုပါးစပ်နဲ့
စုပ်ပေးလိုက်တာ…တစ်ကိုယ်လုံးကိုထွန့်ထွန့်လူးသွားတာဘဲရှင်…လည်ပင်း တစ်လျှောက်ကိုလည်း.. လျှာနဲ့..ဖိဆွဲလေး ဆွဲလိုက်တော့..ကျမ
ကြက်သီးမွေးညင်းလေးတွေတောင်ထသွားတယ်….ကျမသိတာပေါ့..ကျမကိုစိတ်လာအောင် ဆွပေးနေတာမလား… ပြီးတော့မှ..ဟင်း..ပြောလိုက်ချင်ဘူး….
ဘာရမလဲ..ကျမလည်း ..သူ့ အင်္ကျီ ကိုဆွဲလှန်လိုက်ပြီး .. သူ့ ဗိုက်သားလေးတွေကို လျှာနဲ့ရက်ပေးလိုက်တာ သူလည်း ထွန့်ထွန့်ကို.လူးသွားတာဘဲ.
သူ..ကျမ အပေါ်က ကုတ်အင်္ကျီကို ချွတ်လိုက်ပါတယ်..အတွင်းက အင်္ကျီကို ကျယ်သီးဖြုတ်လိုက်ပြီး ထွက်လာတဲ့ စနေနှစ်ခိုင်ကို ဖြစ်ညှစ်စုပ်ကိုင်လိုက်ပါတယ်…ပန်းနုရောင်သန်းနေတဲ့ကျမရဲ့ နို့သီးထိပ်လေးကို လက်ညှိုးလေးနဲ့ ဆွပေးတော့ကျမ နို့သီးခေါင်းလေး မာလာတာပေါ့…
သူ့ပါးစပ်ကြီးနဲ့ ကျမ နို့နှစ်လုံးကိုတစ်ဖက်စီ
ကျမ ဆောက်ဖုတ်ထဲက အရည် ကြည်လေး တွေထွက်လာတော့တာပေါ့….နို့သီးခေါင်းလေးတွေ ကိုစို့ပေးနေရာက ကျမ ဗိုက်သားလေးတွေကို..
လျှာနဲ့ရက်ပေးပါတယ်…ယားကျိကျိနဲ့ အတော်ခံလို့ကောင်းတယ်…ကျမ ချက်ကို လျှာဖျားလေးနဲ့ထိုးမွှေလိုက်တော့ ကျမ အသဲတွေ ကလီစာတွေ..ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်သလို ခံစားရပါတယ်..ရှင်..
သူ့ ပါးစပ် ကြီးက ကျမ ဆီးခုံမွှေးတွေကို လျှောက်ရက်ပေးနေ ပြန်ပါပြီ…ကျမ ကော့ပြန်နေတော့တာဘဲ…ကျမ ဆောက်စိကိုလျှက်
ပေးရင် သိပ်ကောင်းမှာဘဲ…ကျမ သိပ်ယားနေတာကိုး တောင့်တမိပါတယ်…..ကိုကိုရယ်..စီစီရဲ့စိစိလေးကို လျှက်ပေးပါလားရှင်ရယ်…ပါးစပ်က
ထုတ်ပြောလို့လဲမရဘူးလေ..မိန်းမသားဘဝကိုး…ရင်ထဲကဘဲ တောင့်တနေမိတော့တယ်…ကိုကိုရယ် ရှင်ဝဋ်လည်လိမ့်မယ်သိလား…..
သူလေ ပေါင်တွင်းသားလေးတွေကို လျှောက်ရက်ပေးနေတာ..စိတ်တိုချင်စရာပါဘဲ…
ကျမ သူ့ခေါင်းကို ကိုင်ပြီး ဆောက်ဖုတ်ဝမှာတေ့ ပေးလိုက်ပါတော့တယ်….
ဆောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်း တလျှောက် ဆုန်ချီ ဆန်ချီ လျှာနဲ့ထိုးလိုက် ရက်လိုက်နဲ့ပေါ့….ကျမ ဆောက်စိကိုလုံးဝ မထိဘူး…
ကျမ အလိုကိုသူမလိုက်ဘူး…သိပ်ဆိုးတဲ့ လူကြီး…
ခြေလေးဆောင့်ဆောင့်ပြီး ဆန္ဒပြလိုက်တော့မှစိစိလေးကိုလျှာနဲ့ လျက်လိုက်ပါတော့တယ်.. သူ တော်တော်လေးကို မိန်းမကျမ်းကျေတဲ့လူကြီး…ကျမရဲ့ရွှေကြုတ်လေးကို
အသာအယာလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဖြဲလိုက်တော့…ပတ္တမြား စိစိလေး ပြူးထွက်လာတာပေါ့…အဲဒီ.. ပတ္တမြားလေးကို…ချိုချင်ယက်သလို…ယက်လိုက်…..တဖြေးဖြေးချင်း…လျှာလေးနဲ့…တဆတ်ဆတ် ထိုးလိုက်… လျှာပြားကြီးနဲ့….ပွတ်ဆွဲလိုက်…ပညာကုန်ပြနေလိုက်တာ…ကျမ..နှစ်ချီလောက်တောင်.. ပြီးသွားတယ်ထင်ပါရဲ့..ကောင်းလိုက်တာကိုလွန်ပါရော…ဟင်း..ဟင်း..ဟင်း…..
သူလေ ကျမ ဆောက်ဖုတ်ထဲကို လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းနဲ့
ချောချောချူချူဘဲ ဝင်သွားပါတယ်…လက်ကိုပက်လက်လှန်လိုက်ပြီး…ဆောက်ခေါင်း အမိုးကို လှန်လှန်ပြီးကုတ်နေလိုက်တာ…
ကျမဆောက်ခေါင်းထဲက အကြောလေးကိုသွားသွားပြီးခလုပ်တိုက်တော့ ကျင်ကျင်သွားတာဘဲ…ယားလဲ တစ်အားယားတယ်…သူများတွေပြောပြောနေတဲ့ ဂျီစပေါ့…ဆို
အဲသလိုလုပ် နေ တော့ ကျမဆောက်ရည်တွေပိုထွက်လာတာပေါ့…လက်တစ်ချောင်းချောင်သွားတော့ လက်နှစ်ချောင်းထိုးသွင်းလိုက်ပြန်ပြီ….ကိုကိုရယ်..ဘယ်လိုတွေလုပ်နေတာလဲ…ဟင်….ညီမ… ခံချင်နေပြီဆိုတာသိရဲ့လား…ဟင်း..အင်း..အင်း…
လက်နှစ်ချောင်းနဲ့ ကျမ ဆောက်ခေါင်းထဲက အကြောကိုလည်းကုတ်မိရော ..ကျမတောင့်တနေတဲ့
ဆောက်စိလေးကို လျှာနဲ့ထိုးပြီးရက်လိုက်ပါတော့တယ်…အချိန်ကိုက်ကွက်တိဘဲ…. ကျမအလိုလို ကော့ ကော့ပေး နေမိပါတယ်… ကျမ ရုံးလို့လဲမရ ရုံးလည်းမရုံးချင် …ကောင်းလိုက်တာလဲ လွန်ပါရော…. ဆောက်ခေါင်းထဲက အကြောကို သူကုတ်ထားလိုက်ပြီး..ကျမဆောက်စိကို လျှာနဲ့
ကျမ ဆောက်ခေါင်းတစ်လျှောက် ရှုံ့ချီ ပွချီ ဖြစ်လာပြီး
သူ ကျမ ပြီးသွားတာကို သိတယ်လေ…သူ့အင်္ကျီတွေချွတ်လိုက်ပါတယ်.. ကျမကိုဆွဲထူလိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းကိုနမ်းလိုက်ပါတယ်…နို့နှစ်ခိုင်ကိုလည်း…တစ်ဖက်..တစ်လှည့်စီ..စို့ပေးလိုက်… လက်တစ်ဖက်ကလည်းတစ်ကိုယ်လုံးလိုက်ပွတ်လိုက်နဲ့…အလုပ်ကိုရှုတ်နေတော့တာဘဲ…. ခဏကြာတော့ ကျမ စိတ်တွေ
ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားပေးပြီး…ကျမ လုပ်ငန်းစပြီပေါ့…
ဒေါသတကြီးနဲ့ ကျမကိုယ် ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ညိမ့်ပြီးခေါ်နေတဲ့…
သူလည်းကျမတစ်ကိုယ်လုံးစိတ်ကြိုက်နှယ်ထားတော့..စိတ်လာနေပြီလေ..ကျမသိတာပေါ့…သူ့ လီးကြီးက မာတောင်နေတာဘဲ…ကျမ သူ့ရဲ့ လမွှေးတွေကိုလျှာနဲ့ရက်ပေးလိုက်တယ်…
ပြီးတော့ သူ့ဂွေးဥလေး နှစ်လုံးကို လျှာနဲ့ရက်ပြီး ပါးစပ်နဲ့စုပ်ပေးလိုက်တော့ ……
သူမနေ နိုင်တော့ဘူး…ကျမ ခေါင်းကိုကိုင်ပြီး သူ့လီးကို ပါးစပ်ဝမှာလာတေ့ပေးတယ်…ကျမ ရီချင်လိုက်တာ… လက်စားချေလိုက်ရလို့လည်း ကျေနပ်နေမိတယ်…ပညာနည်းနည်းပေးလိုက်တာပါ…
တစ်အားလည်း..ပညာမပေးရဲဘူး…သူစိတ်ဆိုးသွားမှဒုက္ခ…အလုပ်ခန့်စာကရသေးတာမဟုတ်.. အခုထိ စာမေးပွဲဖြေနေဆဲလေ..သိတယ်မလား…
ကျမ စေတနာနဲ့ စိတ်ပါလက်ပါ ဒစ်လေးကို စုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်….သူကောင်းလွန်းလို့ တဆတ်ဆတ်တုန်နေတော့တာဘဲ…
လီးကိုအရင်းက ကိုင်ပြီးအထက်အောက် ပွတ်တိုက် ပေးလိုက်တော့ သူ့ဒစ်ညိုကြီး..
သူ ကျမ ဖင်ကိုလှမ်းကိုင်လိုက်တယ်..
ဖင်ဝလေးကို လက်ညှိုးနဲ့ ထိုးထည့်လိုက်တာ လက်တစ် ဆစ်လောက်ဝင်သွားတယ်…ကျမ တွန့်သွားတာပေါ့.. အွန့်..
ကျမ ဖင်ကိုများလိုးမလို့လား မသိ…
ဖင်လိုးခံရတာ တစ်အားနာတယ်လို့ ပြောသံကြားဖူးတယ်…
ကျမ သူ့အပေါ်တက်ထိုင်ပြီး လီးကိုဆောက်ဖုတ်ဝတေ့ပြီး ဆောင့်ထိုင်ချ လိုက်ပါတယ်…သူ့ လီးကရှည်တယ်ဆိုတော့ ရင်ထဲကို အောင့်သွားတော့တာဘဲ..
သူကကျမခါးလေးကို ကိုင်ပြီး ခပ်မြန်မြန်လေး မတင် ပေးတယ်…ဆောင့်ရတာ ဆောက်ဖုတ်တော်တော် ကျိန်းတယ်… ထိလည်းတစ်အားထိတယ်.. ပြီးတာကတော့ မပြီးချင်ဘူး …ကျမ ထိမ်းထိမ်းသိမ်းသိမ်းလေး ဆောင့်တော့ သူအားမရဘူးလေ…
ကျမခြေထောက် နှစ်ချောင်းကို ဆိုဖာပေါ် တင်ခိုင်းပါတယ်…
ပြီးတော့မှ ကျမ ခါးကိုကိုင်ပြီး အောက်က ကော့ပြီး ဆောင့်ပေးတာကိုး…ကျမ အောင့်တာပေါ့ ..ပြီးတော့ ကျမ ဆောက်ဖုတ် တစ်လျှောက်ကိုပွတ်တိုက်သွားတော့တော့်တော့်ကိုလည်း ကောင်းပါတယ်…ကျမ ထက်သူက ပိုပြီး ဖီးလာနေတယ်လေ…ကျမ သိတယ် သူပြီးချင်နေပြီ…ကျမကို ဆိုဖာပေါ်လှဲချ လိုက်ပါတယ်…. ပွဲသိမ်းအချီ မညှာမတာ ထိုးတော့မယ်လေ…
ကျမ ပေါင်ကားပေးရုံကလွဲ လို့ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ….
ကျမ ပေါင်နှစ်လုံးကို ကိုင်ပြီး ထိုးထည့်လိုက်တာ တစ်ဆုံးထိဝင်သွားပါတယ်…
အချက်၂၀ လောက် မနားတန်းလိုးပါတော့တယ်….ကျမ လည်း ကော့ပြန် သွားတော့တာဘဲ…
နောက်ထပ်၁၅ချက် လောက်ဆောင့်ပြီး ကျမဆောက်ဖုတ်ထဲမှာ မွှေ့နေတော့တာပါဘဲ… ကျမလည်းကောင်းလွန်းလို့..ဆောက်ရည်တွေစီးကျလာပါတော့တယ်…
ပွဲသိမ်းလီး…အချက်၃ဝလောက်မနားတန်းဆောင့် လိုက်တော့ ကျမ ဆောက်ခေါင်းထဲ ပူကနဲ ..ပူကနဲ..ဖြစ်သွားပါတယ်..သူပြီးသွားပြီ..
ကျမ မပြီးသေးဘူး…မရပ်လိုက်နဲ့ …ဆက်လုပ်လိုက်..ကျမပြီးခါနီးပြီ..မရပ်နဲ့… အား..အား..အား…အီး…အီး..ဝူး..
ဆောင့် ..ဆောင့်..၅ချက် လောက်ဆောင့်ပေးစမ်းပါ..ကျမ
ပြီးတော့မယ်..ဆောင့်..အင်း..အင်း..ဆောင့်..ဖတ်..ဖတ်..ဖတ်….အား..အား.. ကျမလည်း ပြီးသွားပါတော့တယ်…သူလည်းတော်တော်မောသွားပုံရတယ်… ကျမလည်း…နောက်ဆုံး အချီ အပီဆွဲလိုက်ရတာဆိုတော့….
ကျမကိုယ်ပေါ်မှာမှောက်သွားသူကတော့…ကျမသူဌေး..ဖြစ်လာမဲ့သူပေါ့… သူကျမအပေါ်မှာခဏနှပ်နေပြီး…ကျမပါးလေးကိုကြင်ကြင်နာနာ နမ်းပေးနေပါတယ်… အဲဒါကျမတို့ မိန်းခလေး အကြိုက်ဆုံးဘဲလေ…သူ့ကိုယ်ကြီးက ကျမအပေါ်မှာလေးနေပေမဲ့ ကျမလည်းသူ့ကိုပြန်ဖက်ပြီး ..နမ်းပေးလိုက်ပါတယ်…သူ့ကိုလည်းသိပ်ချစ်သွားတာလား… မသိပေမဲ့..သူ့ကိုတော့..ကျမ ဖုတ်ဖုတ်လေးနဲ့ ..နှလုံးသားကတော့…သခင်တစ်ယောက် အဖြစ်လက်ခံလိုက်ပါပြီ…သူကတော့ ကျမကိုလက်ခံပြီလား….အထင်သေးသွားပြီလား… ဒွဟစိတ်တော့ဖြစ်နေဆဲပါ….ရင်ခုန်နေရဆဲပေါ့….
သူ့ လီးကြီးကို ကျမ ဆောက်ဖုတ် ထဲက ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်တော့ သုတ်ရည်တွေ ကျမ ဆောက်ခေါင်းထဲကစီးကျလာပါတော့တယ်…
တောက်လျှောက်…ကျမအပေါ်တက်လိုးတော့မယ်ဆိုတာကတော့ကျိန်းသေပေါ့ရှင်… နောက်တစ်ချီမလာခင်..အမြန်လေးအဝတ်အစားလဲ..သူဌေးကို..ဒရောသောပါးနှုတ်ဆက်ပြီး… အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်…